Hagaajinta Qaboojiyaha Hawada - Tenants Victoria
Fiiri in hawa qaboojiyahaada (air conditioner) uu shaqeynaayo.
Maxey tahay sababta haddu?
Haddii hawa qaboojiyahaaga (air-conditioner) uu u baahan yahay in la hagaajiyo, codso haatan. Haddii kale kuleylka ayaad ku raafaadeysaa todobaadyo ka hor intaan lagu uhagaajinin.
Hagaajinta hawa qaboojiyaha (air conditioner) ma arin deg deg ah baa?
Laga yaaba. Waxyaabaha hagaajinta raba waxaa loo kala saara kuwa deg degga loogu baahan yahay iyo kuwa kale. Laakiin hagaajinta hawa qaboojiyaha (air conditioner) looma diiwaan gelinin arin deg deg ah iney tahay. [Section 3 Residential Tenancies Act (1997)]
Haddii aad cadeyn kartid iney jirto xaalad badbaada ey ku jirto – tusaala khatar ku aadan caafimaadka caruurta, dadka da’ada ah ama kuwa tabarta daran – VCAT waxaa laga yaaba iney go’aansato in hagaajintu ey tahay mid deg dega. Waa inaad bixisaa cadeyn caafimaad oo muujineysa in ciladda ay sababeysa xaaladda badbaada xumida.
Haddii aaladda qaboojiyaha iyo tan kuleylku ey qeybtoo wada yihiin ama ey kala baxsan yihiin, VCAT waxaa laga yaaba iney go’aansato in hagaajintu mid deg dega sababtoo ah hagaajinta kululeeyahau waa deg deg.
Waxaa muhiim ah inaad ogaatid haddii aad bixisid lacagta lagu hagaajiyo qaboojiyaha islamarkaana VCAT ey go’aansato iney deg deg eheyn, mulkiilaha guriga waxaa laga yaabaa inuu dib kuugu soo celin waaya lacagtaada. Sidaa darteed waxaa fiican in uugu horeyn aad aadid VCAT.
Eeg xog dheeri ah oo ku saabsan wax hagaajinta deg dega iyo waxyaabaha aan deg degga eheyn.
Mulkiilaha guriga ma waajib bey ku tahay inuu qaboojiyaha hagaajiyo?
Haa. Wax walba oo uu mulkiilaha guriga bixiyo waa inuu hagaajiyaa haddii loo baahado. Tani waa waajibka mulkiilaha hagaajinta qaboojiyayaashana waxey hoos imaataa waajibaadkaan.
Waxaa jira waxyaaba qaar oo laga reebay: 1) haddii adiga iyo mulkiilaha gurigaada aad ku heshiiseen in hawa qaboojiyaha (air-conditioner) uusan shaqeyneynin islamarkaana uusan qeyb ka eheyn guriga lagaa kireeyay; ama 2) haddii hawa qaboojiyaha (air-conditioner) uu u halaabay daryeel la’aantaada awadeed, islamarkaana mulkiilaha uu ku siiyay ogeysiis aad ku sameysatid. [Section 68 Residential Tenancies Act (1997)]
Aniga naf ahaanteyda ma sameyn karaa mise qof kale ma u raadsan karaa?
Maya. Ma aha adiga inaad hagaajisid hawa qaboojiyaha (air-conditioner) haddii uu mulkiilaha gurigaada uusan ku siinin ogolaansho uunasan ogolaanin inuu bixiyo lacagah oo dhan.
Sideen ku hagaajisinayaa hawa qaboojiyaha (air-conditioner)?
Akhri Hagaajinta hawa qaboojiyaha (air-conditioner) ma mid deg degaa? ka dibna raaca talaabooyinka hagaajin deg dega ama hagaajinta aan deg degga eheyn.
Si aad u codsatid hagaajin aan deg deg eheyn, waa inaad buuxisaa Ogeysiis Mulkiilaha lo diraaya oo laga soo dejisada (bogga CAV).
Hubi in foomka aad ku qortid magaca mulkiilaha islamarkaana diiwaan geli dhammaan waxyaabaha aad rabtid in la hagaajiyo.
Marka aad buuxisid foomka adiga reebo laba nuqul.
Ogeysiiska u gudbi mulkiilaha guriga ama wakiilka guriyaha ama ku dir cinwaanka boostada ee lagu diiwaan geliyay.
Marka ey helaan Ogeysiiska Mulkiilaha loogu tala galay, Mulkiilaha wuxuu leeyahay 14 maalmood oo uu ku hagaajiyo.
Haddii aan ku jiro guri dowladdu leedahayna?
Haddii guri ey dowladdu leedahay aad ku jirtid, mulkiilahaadu waa Agaasimaha Guriyeynta. Si aad hagaajin u codsatid, waxaad sameyn kartaa: inaad raacdid talaabooyinka kor ku xusan ood u gudbisid codsigaada xafiiska kuugu dhow ee guriyeynta, ama waxaad buuxin kartaa foomka bogga intarneetka laga helo ee hagaajinta aan deg degga eheyn. Si aad u ogaatid Xafiiska Guriyeynta meesha uu ku yaalo ama foomka intarneetka booqo bogga Waaxda Adeegyada Baniaadamka.
Maxaan sameyn karaa haddii eysan iga hagaajinin, ama si fiican eysan u hagaajinin?
haddii hagaajinta 14 maalmood gudahood lagu dhameystirin, ama haddii ey kula noqoto in hagaajinta aadan ku qancin, waxaad codsan kartaa baaritaan in lagu sameeya wixii la hagaajiyay oo ey sameeyaan “Consumer Affairs Victoria” (CAV).
Si aad baaritaan u codsatid:
buuxi foomka Baaritaanka waxyaabaha la Hagaajiyay (oo laga heli kara Bogga intarneetka ee Consumer Affairs Victoria)
fomkaaga ku dar nuqulka Ogeysiiska Mulkiilaha
sidoo kale ku dar wixii kaloo dukumiinti ah oo idiin dhex maray adiga iyo mulkiilaha guriga oo ku saabsan waxyaabahaan la hagaajiyay
foomka iyo dokumiintiyada u dir Consumer Affairs Victoria (xogta cinwaanka waxaa laga helaa ffoomka)
Ka dib marka ey helaan foomkaada, baara ayaa kaala soo xiriiraaya arimaha baaritaanka. Baaritaanka ka dib, haddii ey arkaan in mulkiilaha uusan dhameytrin hagaajinta qabyada, waxey la gorgortami karaan mulkiilaha si uu u dhameystiro howshaan. Waxey sidoo kale ku siinayaan warbixin qoraal ah. [Section 74 Residential Tenancies Act (1997)]
Maxaa dhacaaya haddii weli mulkiilaha uusan rabin inuu qabyado dhameystiro xitaa warbixinta ka dib?
Haddii aad warbixinta Baaritaanka ka heshay Gudiga (Consumer Affairs Victoria) laakiin mulkiilaha guriga uusan uusan weli dhameystirin dayac tirka, waxaad codsi u dirsan kartaa Gudiga Victorian ee Dacwadaha Shacbaiga iyo Maamulka ee (Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) si dacwaddaada loo dhageysto 60 maalmood gudahood.
Haddii aadan helin warbixinta baaritaanka 90 maalmood gudahood codsigaada aad u dirtay CAV, waxaad codsi u diri kartaa VCAT iyadoo uusan laheyn warbixinta baaritaanka.
Si aad u codsatid dhageysi:
booxi Foomka Codsiga Guud – Liiska Deganaashaha ee laga hela (weebsaytka VCAT)
ku dheji nuqul oheysiiska aad u dirtay mulkiilaha
ku dheji nuqul aad siisay Xafiiska Warbixinta Baarayaasha ee (Consumer Affairs Victoria inspectors report)
hubi inaad heysatid nuqul codsiga iyo dokumiintiga kala ah ka hor intaadan wada dirin
ku soo dir foomka codsiga iyo dukumiintiga kale cinwaanka VCAT(xogta cinwaanka waxey ku qoran yihiin foomka)
u dhiib nuqul codsigaada ah iyo dokumiintiga mulkiilaha ama wakiilka guriga adigoo shakhsi ahaan u gudbonaaya ama ku diraaya cinwaan diiwaan gashan.
Amarka gudiga cadaaladda
Haddii gudiga uu ku qanco in mulkiilaha uu ku xadgudbay xilkiisa ah inuu dayactiro guriga waxey mulkiilaha mar ku siini kartaa inuu sameeyo dayac tir gaar ah oo mudo loo qabanaayo. [Section 76 Residential Tenancies Act (1997)]
Haddii mulkiilaha uu amarkii hore daba maro
Dib ayaad u soo cusbooneysiin kartaa codsigaada aad u soo qoreysid VCAT, adoo bixinaaya nambarkaaga codsiga islamarkaana sharxaaya inaad u baahan tahay dhegeysi dheeri ahmaadaama dayac tirka aan la dameystirin. Waxaad codsan kartaa in kiradaada lagu bixiyo akoon gaar ah oo kirada ah ilaa inta dayac tirka laga sameynaayo. [Section 77 Residential Tenancies Act (1997)]
Gudiga wuxuu sidoo kale amar ku bixin karaa magdhaw oo lagu qiimeeyay maalinla mudada uu mulkiilaha ku xadgudbay xilkiisa dayac tirka. [Section 209 Residential Tenancies Act (1997)]
Air Conditioner Repair | Somali | October 2014
hagaajinta guriyaha la kireystay
gudiga cadaaladda (VCAT)